Hanaanka doorashada 2016 oo lasoo bandhigay - Caasimada Online
Home Warar Hanaanka doorashada 2016 oo lasoo bandhigay
Hanaanka doorashada 2016 oo lasoo bandhigay
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyada oo la eegayo xaaladda ka jirta Soomaaliya, ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Baarlamaanka Federaalkaba si wadajir ah ugu dhawaaqeen, 28kii bishii Luulyo 2015 in doorasho qof iyo codkiisa ah aysan ka dhici karin, sida ku cad Dastuurka Federaalka Ku-Meelgaarka ah.
Madaxweynaha, Xukuumadda, Barlamaanka iyo madaxda Dawlad Goboleedyada, Maaamul Gobollada ku-meel-gaarka ah iyo bulshada rayidka ayaa isku raacay Mabaadi’ Tilmaameed ee lagu ansaxiyay shirkii Madasha Iskaashiga ee Heerka Sare ee ka dhacay magaalada Muqdisho 28-30 bishii Luulyo 2015. Mabaadi’da Tilmaadeedkaas oo ujeedaddeedu tahay in geeddi socodka doorashada sanadka 2016 uu soo bandhigo hab sharcinimadiisu sarreyso iyada oo loo marayo hab salballaaran, oo ku saleysan geedi-socod loo dhanyahay, kaas oo wada metelaya bulshada Soomaaliyeed.
Geedi-socodka Doorashada Sanadka 2016ka…
1-Waa in uu muujiyo“sharciyad sarreysa” oo loo maray hanaan ballaaran oo loo wada dhanyahay oo ay isla ogolaadeen Dawlad Gobaleedyada Xubnaha ah ee hadda jiro iyo kuwa samaysmaya, waana in uu xaqiijiyo natiijo ay iska dhex aragto bulshada Soomaaliyeed ee maanta (dadka iyo deegaanka intaba) ayada oo xubnaha bulshaduna ay ku heshiiyeen hab-raac cad oo ay isla meel dhigeen.
2-Waa in uu la jaan-qaado dar-dar gelinta Dastuurka Federaalka Kumeelgaarka.
3-Waa in uu kor u qaado oo uu xaqiijiyo ka-qayb qaadashada haweenka iyo dadka laga tirada badanyahay.
4-Waa in uu dhiiri-geliyaa ka-qayb qaadashada axsaabta siyaasadeed hadba heerka uu u ogolaanayo nidaamka Axsaabta Siyaasadeed.
5-Waa in uu kor u qaadaa midnimo qaran, ilaa iyo intii suurto gal ahna, uu hanaan midaysan (ka hir-geliyaa) dhamaan gobolada.
6-Waa in uu noqdaa mid xaqiiqada ku qotoma marka loo eego dhaqaalaha la heli karo, tayada farsamo, iyo amniga.
7-Waa in uu noqdaa mid daah furan, isla xisaabtan leh oo kor u qaada kalsoonida dadweynaha.
8-Waa in uu xambaarsanyahay hanaan ku haboon oo loo mari karo cabashooyinka iyo dacwadaha.
9-Waa in uu si buuxdo u tixgeliyaa sida loo doonayo in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed uu u noqdo mid ka turjumaya oo u taagan midnimada dhulka Soomaaliya.
10-Waa in aysan wax yeello ka imaanin, sida dhiri-gelinta dhaq-dhaqaayo ay ka dhalan karaan hurinta colaado ama wiiqid la wiiqayo horumarada ilaa iyo hadda laga gaaray geedi-socodka dimoqoraadiyaynta iyo dhismaha dowladda.
In la qabto doorasho sanadka 2016 waxay si cad ugu qeexantahay Dastuurka Federaalka Ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Aragtida Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku saleysan Hiigsiga 2016 ayaa si cad u qeexaysa baahida loo qabo in la helo hab lagu kalsoonaan/aamini karo oo awoodda xukunka lagu wareejiyo sanadka 2016, waana arrin mudnaan sare leh. Muddadii afarta sano ahayd ee uu Dastuurku siiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku eg tahay bisha Agoosto 2016. Iyada oo laga ambaqaadayo wadatashigii loo wada dhammaa ee lala yeeshay Baarlamaanka Federaalka, Dowlad Goboleedyada, Bulshada Rayidka ah ayay Dowladdu ku dhawaaqday in doorasho ku saleysan qof iyo codkiisa ayna suurtagal ahayn sanadka 2016.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ka go’an in ay u hawlgasho sidii lagu gaari lahaa hanaan dimuqraadi ah ee loo wada dhan yahay iyo sidii si daahfuran awoodda laysugu wareejin lahaa sanadka 2016. Sidaas darteed, Dowladda Federaalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan hay’adaha kale ee Dastuurku waajibaadka siiyay ayaa soo bandhigay Mabaadi’ Hagaysa habraaca doorashada 2016 kuwaas oo lagu ansaxiyay Madashii Iskaashiga ee Heerka Sare ee ka dhacday Muqdisho 29-30 Luulyo 2015. Qorshe Hawleedkan oo ku saleysan Mabaadi’ Tilmaameed ku saabsan sidii lagu qaban lahaa hanaan wadatashi qaran oo si is afgarad go’aan loogu gaarayo habka ugu habboon ee doorasho loo qaban lahaa sanadka 2016. Siyaasadda Dowladdu waxay sidoo kale ku qotontaa heshiiskii dhexmaray Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Baarlamaanka Federaalka 28kii bishii Luulyo 2015 iyo wadatashiyadii ay la yeelatay Dawlad Goboleedyada oo markii dambena lala wadaagay beesha caalamka.
Si loo gaaro hab is afgarad qaran ee shaqeyn kara, geeddi-socodka wadatashiga qaran waxaa loogu talagay in uu ahaado mid leh marxalado badan, lehna ka qaybgal loo wada dhan yahay oo ka kooban shirar wadatashi oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo marka u dambeysana lagu gaarayo heshiis ku saleysan wadahadal siyaasadeed iyo is afgarad. Natiijada ka soo baxda wadatashiyadan iyo habraaca lagu heshiiyo ee ku saabsan hanaanka doorashada sanadka 2016 waxaa lagu soo saari doonaa xeerarka lagama maarmaanka ah oo ay soo saari doonaan hay’adaha Soomaaliyeed ee ay khuseyso.
Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ) waxay ahaan doonaa hay’ad go’aan qaadasho oo loo wada dhanyahay waxayna ka koobnaan doonaa laamaha Fulinta iyo Sharci Dejinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), Dowlad Goboleedyada, iyo Bulshada Rayidka ah. Madasha (MWQ) waxay go’aan ka gaari doontaa habka ugu habboon ee loo qabanayo doorashada sanadka 2016, waxayna guddoomin doontaa geeddi socodka la raacayo ilaa iyo doorasho laga gaarayo oo ay xukun wareejin sanadka 2016 dhacayso. Taas oo ku saleysan mabda’a is afgaradka (concensus). Arrimaha lagu xallin waayo Madasha (MWQ) waxaa loo gudbin doonaa Madasha Hoggaanka Qaranka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisal Wasaaraha, si looga yeesho dood dheeraad ah.
Si loo xaqiijiyo in loo wada dhammaado sharcina uu u noqdo geeddi socodka iyo natiijada ka soo baxaysaba, madashu waxay ka koobnaan doontaa: Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Wasiiro iyo Xildhibaano heer Federal iyo Dawlad Goboleed ah iyo Bulshada Rayidka. Waxaa muhimad gaar ah leh sidii lagu heli lahaa wakiillo metela haweenka, beelaha Somaliland, iyo dadka laga tirada badan yahay oo tiradoodu u dhiganto inta ay bulshada ka yihiin.
Guddigan wuxuu hoos imanayaa Ra’iisal Wasaaraha, waxaana garwadeen ka ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka. Guddigu wuxuu ka kooban yahay Wasiiradda Cadaaladda ee heer federal, Arrimaha Dastuurka, Warfaafinta, Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka iyo labo wasiir oo ka socda mid kasta oo ka mid ah Dowlad Goboleedyada Federaalka, iyo hal wakiil oo ka socda Xafiiska Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo 3 xildhibaan oo ka socda Baarlamaanka.
1-Wuxuu hananayaa hirgelinta dhabta ah ee go’aanada lagu gaaro Madasha Wadatashiga Qaranka, wuxuu kormeerayaa habsami u socodka wadatashiyada habaysan ee ku cad Qorshe Hawleedka Madasha .
2-Wuxuu xaqiijinayaa sidii geeddi socodka wadatashiga uga hirgeli lahaa gobollada oo dhan si isku mid ah oo loo wada dhan yahay.
3-Wuxuu fududeynayaa iskudubaridka xiriirka siyaasadeed ee ka dhexeeya xubnaha Madasha Wadatashiga Qaranka.
4-Wuxuu bixinayaa talo istiraatijiyadeed, hagid siyaasadeed, sidoo kalena wuxuu taageerayaa Guddiga Taageerada Farsamo (TST) si loo xaqiijiyo in geeddi socodka wadatashigu uu ahaado mid loo wada dhan yahay, oo daahfuran.
5-Wuxuu xaqiijinayaa in geeddi socodka wadatashiga uu ahaado mid is waafaqsan laguna fuliyo waqtigii loogu tala galay.
6-Wuxuu warbixin joogta ah oo waqtiyaysan ka keenayaa geeddi socodka una soo gudbinayaa Madasha.
7-Wuxuu Madasha u soo diyaarinayaa sidii lagu ansaxin lahaa Tilmaamaha Habraaca Fududeynta (Facilitation Guide).
8-Wuxuu raadinayaa dhaqaalihii/kharashkii lagu hirgelin lahaa Qorshe Hawleedka.
9-Wuxuu wadatashi toos ah la yeelanayaa dhamman dadka ay arrintu khuseyso ee jooga gobol walba, si loo hormariyo la xiriirka dadweynaha iyo sharcinimada Madasha Wadatashiga Qaranka. Guddiga Taageerada Farsamo (TST) Guddiga Taageerada Farsamo (Technichal Support Team) oo ay garwadeen ka tahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka waxay mas’uuliyad ka saarantahay laba arrimood oo kala ah; a) taageeridda Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ) iyo Guddi Hawleedka (Task Force), b) wuxuuna xaqiijinayaa arrimaha farsamo ee la xiriira Madasha Wadatashiga Qaranka iyo sidii lagu hirgelin lahaa arrimahaas. Guddigan wuxuu ahaanayaa midka ugu weyn ee talo farsamo siiya Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka, wuxuuna hagid farsamo iyo talo siyaasadeed u fidinayaa Guddi Hawleedka, haddii uu soo codsado, wuxuu soo saarayaa warbixino, qoraallo hordhac ah, wuxuuna bixinayaa taageero la xiriirta sidii loo habayn lahaa Tilmaamaha Habraaca Fududeynta. Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu ka qaybqaadanayaa doodaha siyaasadeed iyo wadahadalka guud ee dadweynaha ee la xiriira geeddi socodka doorashada sanadka 2016.
Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu kaloo Madasha u fududeynaya xiriirka ay la yeelanayso Dowlad Goboleedyada. Wuxuu diyaarinayaa barnaamijyada lagu la xiriiro dadweynaha iyo istiraatijiyadda isgaarsiinta. Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu ka kooban yahay hawlwadeeno ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, labo xildhibaan oo ka socda Barlamaanka iyo wakiillo ka socda Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (hal wakiil midkiiba) iyo koox xeeldheerayaal ah oo ka kooban la taliyeyaal farsamo iyo la taliyaal kale oo ka imanaya Qaramada Midoobay kuwaas oo ahna khubaro iyo fududeeyeyaal.
1-Wuxuu xaqiijinayaa habsami u socodka hogaanka guud ee farsamo iyo maareynta dhanka farsamo iyo sidii lagu hirgelin lahaa hawlaha geeddi socodka wadatashiga.
2-Wuxuu la tashanayaa dhammaan daneeyeyaasha ay arrintu khuseyso si loo ogaado danahooda, rabitaankooda/kartidooda ku aaddan ka qaybgalkooda, si uu talo u siiyo Guddi Hawleedka (GH) iyo Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ).
3-Wuxuu maareynayaa guddiyada farsamo, xirfadlayaasha, iyo hawlwadeenada maamulka.
4-Wuxuu diyaarinayaa barnaamijyo iyo qorshe hawleedyo, wuxuu go’aaminayaa hawlaha loo baahan yahay, wuxuu sheegayaa arrimaha mudnaanta leh, wuxuuna xaqiijinayaa hirgelinta barnaamijka.
5-Wuxuu la yeelanayaa xiriir shaqo oo joogta ah xogtana la wadaagayaa Guddi Hawleedka Madasha Watashiga Qaran.
6-Wuxuu xaqiijinayaa sidii taageero siyaasadeed iyo mid maaliyadeedba loogu heli lahaa in geeddi socdka wadatashiga laga hirgeliyo dhammaan gobollada dalka, wuxuuna xaqiijinayaa in ka qaybgalka geeddi socodka uu ahaado mid loo dhan yahay oo habboon.
7-Wuxuu shir u diyaarinayaa xubnaha Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka si ay ugu heshiiyaan mowduucyada/arrimaha laga doodayo iyo ajendaha geeddi socodka wadatashiga, wuxuuna fududeynayaa doodaha shirka.
8-Wuxuu faahfaahinayaa Qorshe Hawleedka, wuxuuna guddiyada shaqeynaya ku kaalmeynayaa sidii ay xog uga heli lahaayeen mowduucyada qaarkood (waxay raadinayaan taageerada deeq bixiyeyaasha iyo dowladda si loo helo kaalmo farsamo marka loo baahdo).
9-Wuxuu xaqiijinayaa in geeddi socodka wadatashiga uu u socdo sidii loo qorsheeyay, wuxuuna xogta u gudbinayaa wixii fikrado ah oo uu soo ururiyo Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka.
10-Wuxuu diyaarinayaa warbixino ku saabsan hormarka la gaaray toddobaad walba, wuxuuna u gudbinayaa Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka iyo daneeyeyaasha kale ee ay arrintu khuseyso (sida deeqbixiyeyaasha iyo saaxiibada dhiggooda ah), iyo wixii kale oo warbixin ah ee loo baahdo sida warbixinta la siiyo warbaahinta.
11-Wuxuu qorayaa maqaallo iyo hadallo la jeediyo iyo khudbado, wuxuuna u qorayaa Guddi Hawleedka iyo Madasha Wadatashiga Qaranka si dadweynaha loogu wargeliyo wixii horumar ah ee laga gaaray geeddi socodka wadtashiga.
12-Wuxuu xaqiijinayaa sidii dhaqaale loogu heli lahaa xoghaynta iyo guud ahaan geeddi socodka wadatashiga.
13-Wuxuu diyaarinayaa qorshe ku aaddan sidii kaalmo saad iyo farsamo loo heli lahaa.
14-Wuxuu maamulayaa dhaqaalaha/kharashka ku baxaya, wuxuuna mas’uul ka yahay sidii lagu heli lahaa isla xisaabtan, daahfurnaan iyo wax qabadka shaqaalaha maamulka iyo barnaamijkaba
1-Ergo doorasho oo ka kooban dalka oo dhan:
Waxaa la sameynayaa Ergada Doorasha (Electoral College) oo ka kooban dalka oo dhan si ay u doortaan 275 xildhibaan. Nidaamka caynkan oo kale ah wuxuu keeni karaa in la dhiso axsaab siyaasadeed oo heer qaran ah iyada oo la raacayo nidaamka matelaadda u dhiganta ee uu xisbi kasta barlamaanka ku yeesho tiro xildhibaano ah oo u dhiganta codadka uu doorashada ka helo. Ergo doorasho oo heer dowlad goboleed ah:
2-Ergo doorasho oo heer degmo ah:
Degmo walba oo ka mid ah 92dii degmo ee jirtay sanadkii 1991 ayaa sameynaysa ergo doorasho oo dooranaysa xildhibaanada baarlamaanka u metelaya degmadooda (tusaale ahaan, degmo walba waxay dooranaysaa 3 Xildhibaan, taas oo wadarta xildhibaanada baarlamaanka ka dhigaysa 276).
3-Ergo doorasho oo beel ku saleysan:
Waxaa la sameynayaa ergo doorasho oo beel ku dhisan (tani waxay la mid tahay sidii wax lagu soo xulay sanadkii 2012 oo 135 odey dhaqameed ay soo xuleen xildhibaanada) laakiin tiro intaas ka ballaaran oo beelaha metelaya ayaa soo xulaya xildhibaanada metelaya beelahooda.
Wadatashiyadda Heerka Dawlad Goboleed:-
Kulanka Sedexaad (Maalinta Labaad)(60 Daqiiqo):- Furitaanka Madasha (30 daqiiqo)
Koox kasta waa in warbixinteeda soo gudbisaa (10 daqiiqo koox kasta) Soo gabagabaynta dooda Ra’iisuwasaaraha ama Wasirka ka wakiilka ah (30 daqiiqo).
Xiritaanka Shirka Madaxweynaha Dawlad/Maamul Goboleedka (10 daqiiqo). 14 Wadatashiga Qurbojoogta
Waxay ku xirnaan doontaa imkaaniyaadka dhaqaale iyo waqti, labo kulan oo London ama Mineapolis lagu kala qabto ama kulan weyne Nairobi la isku keeno wakiilada Qurbojoogta.
Marka la soo gabagabeeyo Wadatashiga Heer Gobol iyo Heer Federal, waxaa hanaanka doorasho ee la isku raaco sharci ku meel marin doona hay’adaha federaalka ee ay khusayso.